Tianay ny Mahita ny “Fombanay, ny Kolontsainay, ny Fombandrazanay Ary Ny Fomba Fiainanay.” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2018 12:22 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, English, русский, Italiano, English
Angatahan'ny Tetikasa Reframed Stories ny olona mba hamaly ireo lohahevitra sy olana mibahan-toerana mitranga anatin'ny fitantaràna ny vaovao momba ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo. Ireny tantara ireny dia fitaratry ny zavatra eritreretin'ireo olona izay matetika no ny hafa no misolo tena azy ireo eny anaty fampahalalambaovao. Nisy vondron-teny noforonina tamin'ny fampiasàna ny Media Cloud platform, fitaovana iray fandalinana angondrakitra mandalina ireo lahatahiry avy aminà famoahambaovao mandritra ny vanim-potoana iray voafaritra, ahafahan'ireo mpandray anjara manadihady sy miresaka ny fomba fijeriny voalohany momba izay mety hisoloana tena azy ireo eny anaty media. Tsy mahamaika ilay tetikasa ny hanao fanambaràna maimaika momba ny angondrakitra, fa ho solony, ireo dia ho teboka fanombohana habaka iray hisian'ny adihevitra momba ny hahafahan'izy ireo mandrafitra ny ho fahatazànana azy manokana amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Julio Santi dia avy amin'ny Vahoaka Kichwa Peoples ao Sarayaku amin'ny faritra Amazoniana any Ekoatora, ary efa ela niadiana tamin'ny sehatra nasionaly sy iraisampirenena mba hampiatoana ireo tetikasa fitrandrahana ao amin'ny tanin'izy ireo. Fandikàna ho soratra ilay lahatsary fandalinana nataon'i Fernanda avy amin'ireo zavontenin'ny hoe “Selva Viviente” (Ala Velona) ity atolotra manaraka ity, izay fomba fiaina iarahana miaina amin'ny natiora. Anatin'ilay zavonteny, ny teny hoe “Sumak kawsay” (miaina tsara) no nahasarika ny sain'i Julio.
Tao anatin'ilay zavonteny, nofidiako ny [fiteny hoe] “sumak kawsay” (miaina tsara) satria ny Sarayaku dia mitahiry ny fombandrazany izay miaina eny anivon'ny vahoaka. Tsy tianay ho voapentina izany, tsy tianay ry zareo hanohintohina ny alanay sy ny reniranonay. Ambonin'ny zavatra rehetra, mila fiainana mendrika anaty fandriampahalemana sy firindràna izahay.
Ny tianay [hiseho] anatin'ity zavonteny ity dia ny “Fombanay, ny Kolontsainay, ny Fombandrazanay Ary Ny Fomba Fiainanay.”
Ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra Rising Frames novolavolaina ho ampahany anatin'ny atrikasa nokarakarain'ny Departemanta misahana ny Fifandraisana ao Sarayaku tamin'ny 17 May 2018 izay namondrona ireo tanora mpikambana avy amin'ny vondrom-piarahamonina mba handinika ny fomba hahatazànana azy ireo , na ny olana mampiasa loha azy, eny anaty fampahalalambaovao Ekoatoriàna. Taorian'ilay adihevitra, namorona tantara izy ireo ho setrin'izay fahatazànana izay. Iray tamin'ireo mpandrindra ilay atrikasa, José Santí efa nandray anjara tany ampiandohana tao anatin'ny Tetikasa Reframed Stories ary nanoratra ny tantara manokana avy aminy momba ny fahatazànana ny Sarayaku.
Amerika Latina 1 andro izay